Just For Knowledge | Myanmar Black Hacking
1 Just For Knowledge
ကျွန်တော် သဘောကျလို့ မှတ်ထားတာလေးပါ
Online ကညီကိုတွေ အရမ်း Deface တင်ချင်ကျတယ်.. .. .. ဆိုဒ်တိုင်းလဲ တင်လို့ မရဘူးလေ. ။ grin emoticon
ခု ကျွန်တော် Deface is easy or not ? ဆိုတာလေး ရှင်းပါရစေ ။ အမှန်ပြောရရင် Deface လုပ်တာလွယ်ပါတယ် .. ခက်တာလဲရှိပါတယ်. . . Exploit တခုရှာ အဲ့ဒီ Exploit တခုပေါ်အခြေခံပြီး Shell တင် , တင်ပြီး Deface အုပ်ပေါ့ .. Exploit တခုထဲမှာ ဆိုဒ်ပေါင်း ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်.. Exploit တခုထဲကိုအခြေခံပြီး ဆိုဒ်တိုင်း ဟက်လို့ ရတယ်လို့ တလို မရတဲ့ ဆိုဒ်တွေလဲရှိပါတယ်.. ရတဲ့ဆိုဒ်တွေကိုတော့ vulnerable ဆိုဒ်လို့ ခေါ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီထဲက SQL , LFI , RFI တွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်. RFI - remote file inclusion ကတော့ site hole တခုကနေ shell တင်ထားတဲ့ hosting ကိုခေါ်ယူပြီး deface လုပ်တာပါ ။ LFI - L0cal file Inclusion ကတော့ LFI vulnerable ရှိတဲ့ဆိုဒ် ရဲ့file ကိုယူပြီး .. tamper data add-on တို့ ဘာတို့ သုံးပြီး deface လုပ်တာ ပါ ။
ဒီထဲက LFI ကတော့လွယ်ပါတယ်. . . နောက်မှ LFI ကိုအသုံးပြုပြီး ဟက်နည်း ရေးပေးပေါ့မယ်.. .. နောက်ပြီး SQL ပါ ။ SQL injection ဆိုတာကတော့ ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ အဖြစ်အများဆုံးနဲ့ အမှားအများဆုံး web application တခုပါ ။ ၄င်း web application အမှားတစ်နေရာကိုရှာပြီး Site အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ပြီး မွေနှောက်နိုင်ပါတယ်.. .. SQL Inject လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Admin ပလန် တွေမှာ Shell တင်ပြီး Deface တင်နိုင်ပါတယ်.. ဆိုဒ်တခု၇ဲ့Uploadတည်နေရာရှာ , ရှာပြီး Shell တင် , တင်ပြီး Path အတိုင်းပြန်ရှာ ပြီးမှ Deface အုပ်ရတာပါ.. Joomal ဆို Exploit ကနေပိုဖောက်ကျတယ်.. ကိုကစ်ဒိုရေးထားတဲ့ Joomal Hacking လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ Exploit တခုကိုအခြေခံပြီး ဟက်ပြသွားပါလိမ့်မယ်... WP ဆိုတာ Wordpress ပါ ။ WP ဟက်နည်းတွေလဲရှိပါတယ်. ဆိုဒ်တိုင်း 100% လုံခြုံတယ်လို့ မရှိပါဘူး . . အဲ့ဒီ မလုံခြုံတဲ့ Security ကိုရှာပြီးဖောက်နိုင်၇င်တာက Hacker ဖြစ်ပြီပေါ့ xD ခု ချက်ချင်း Deface တင်ချင်လှပါပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ထဲက Web hacking lable မှာ Web hacking တွေစုထားပါတယ် . . အဲ့မှာ သွားဖတ်ပေးပါ ။ နောက်ပြီး What is Shell ? Deface အုပ်ပြီဆိုရင်တော့ Shell နဲ့ တင်ပြီးမှအုပ်ကျပါတယ်. Shell ဆိုတာဘာလဲ ? အဲ့ဒါ MHU မှာ ညီကိုတွေ ရှင်းပြတဲ့ post လေးတခုရှိတယ်.. Shell ဆိုတာ ဟက်ကာတွေသုံးတဲ့ လက်ကိုင်သုံးတဲ့ Page တခုပါ ။ အဲ့ page ကို ကိုယ်ဟက်ထားပြီးသား ဆိုဒ်ပေါ်တင် လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဆိုဒ်ထဲမှာ ရှိတမျှ Data တွေအကုန်လုံး ဒီ Shell Page ပေါ်မှာ မြင်ပါပြီ. . ဟက်ကာတွေဟာ ကိုယ် ဟက်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တခုမှာ Shell တင်လို့ ရတဲ့အချိန်ကအရသာအရှိဆုံးအချိန်ပေါ့ (ကျွန်တော်ဆို ဘယ်လိုပျော်မှန်းကိုမသိတာ) xP အရင်ကပေါ့ ခု Shell တင်လို့ ရတဲ့ဆိုဒ်တွေအများကြီးပါ ။ သေချာလေ့လာရင် ပညာဆိုတာကုန်တယ်မရှိပါဘူး .. အဓိက က ကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတင်တာပါ ။ စိတ်ဝင်စားတလောက် အရာထင်ပါတယ် ။ smile emoticon သူများတကာကိုထိုးဖောက်ပြီးအနိုင်ယူချိန်မှာပျော်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုပြန်ထိုးဖောက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ခံနိုင်အောင်ကျိုးစားပေါ့ . . . ၀ဋ်ဆိုတာ နောက်ဘ၀မကူးပါဘူး ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံ ကိုယ်သာ ပြန်ခံရတာပါ . . . grin emoticon ကဲ့ ဒီလောက်ပါဘဲ Deface အကြောင်းရော Shell အကြောင်းရော သိလောက်ပါပြီ .. .. ..
post By KT Yûř!kô<MBH>
credit-မေ့နေ့ပီဟီး မှတ်ထားတာ ကြာပီမို့ နာမည်ကိုတောာ့
Shwe Ko Yan Taw ဖြစ်ဖို့များပါတယ် :p
by KT Yur!ko
Labels: Deface . Knowledge
May 7, 2018, 9:51:00 AM